Xaliimo Aadan Diiriye oo caawa lagu dhex dilay guri ay ka degan tahay magaalada B/xaawo – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Xaliimo Aadan Diiriye oo caawa lagu dhex dilay guri ay ka degan tahay magaalada B/xaawo
Kooxo hubeysan ayaa caawa guri ku yaalla magaalada B/xaawo ee gobolka Gedo ku dilay haweeney lagu magacaabo Xaliimo Aadan Diiriye, taas oo la sheegay inay ka tirsanayd ururka haweenka ka dhisan magaaladaasi.
Sarkaal ka tirsan maamulka gobolka Gedo oo aynu goordhaw qadka teleefanka kula xiriirnay ayaa inoo sheegay in koox hubeysan ay weerar ku qaadeen guri ay deganeyd Allaha u naxariistee Xaliimo Aadan Diiriye, kadibne isla goobtaasi lagu dilay.
Allaha u naxariistee Xaliimo Aadan Diiriye ayaa ahayd gudoomiye ku-xigeenkii ururka haweenka ee magaalada B/xaawo.
Dhinaca kale, kooxihii falka dilka ah ka dambeeyay ayaa la sheegayaa inay islamarkiiba isaga baxsadeen goobtaasi.
Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo markii dambe soo gaaray goobta uu dilka ka dhacay ayaa howlgalo baaritaano ah goobtaasi ka sameeyay.
Illaa iyo haatan ma jirto cid baaritaankaasi lagu soo qabtay ama sheegatay mas’uuliyadda weerarkaas.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa mudooyinkii dambe deegaanada gobolka Gedo kusoo badanayay dilalka loo geeysanaayo dadka shacabka ah iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya, waxaana inta badan dilalkaasi sheegta inay ka dambeeyaan dagaalyahanadda Al-shabaab.